လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဟာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်း ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ အသားအရောင်မရှိဘူး၊ လူမျိုးမရှိဘူး၊ ကျား/မ မရွေးဘူး။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ မူပိုင်လူမျိုးမရှိဘူး၊ ရှိတယ်လို့ပြောရင် အဲဒီဘာသာတရားဟာ ကျဉ်းမြောင်းပြီး အစွန်းရောက်တဲ့ ဝါဒဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အင်မတန်မှ သိမ်မွေ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာတရားတွေဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသာ သတ်မှတ်ကိုးကွယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမြေဟာ အင်မတန်မှ အကျည်းတန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာတရားတွေကို ငါတို့လူမျိုးတွေအတွက် သီးသန့်သာသနာလို့ မှတ်ယူလိုက်ရင် မေးပါရစေ။ ဘာသာသာသနာပြန့်ပွားရေးဆိုတာ လုပ်နေဖို့ လိုသေးလို့လား??? အခု ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ ဟောနေပြောနေကြသလို မွေးဖွားလာသမျှကို သီးသန့် ထိန်းကျောင်းပြီး ထိန်းသိမ်းရုံမျှနဲ့လုံလောက် မနေဘူးလား။ အဲဒီလောက်ကလေးမှ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ အကြံပေးပါရစေ၊ ပြန့်ပွားရေးဆိုတာကြီးကို ခဏမေ့ထားလိုက်ပါလို့။ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ပြန့်ပွားစေချင်ရင် လူမျိုးမရွေးနဲ့၊ အသားအရောင်မရွေးနဲ့၊ ရွေးပြီမဟုတ်လား၊ အဲဒါမပြန့်ပွားနိုင်တော့ဘူး။ တဖြေးဖြေးတောင်ကျဆင်းလာမယ့် နိမိတ်လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက် ရင်ထဲ အသည်းထဲက နှစ်နှစ်ကာကာသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ အချစ်ထားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ထုတ်ပစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ တခြားမကြည့်နဲ့၊ ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာ သားသမီးမွေးထားတဲ့မိဘတွေဘဝကိုပဲကြည့် ။ သားသမီးတွေက အပြင်မှာ သူတို့ ဘာသာဘာဝ နှစ်သက်ပြီး ရင်ထဲအသဲထဲထိရောက်အောင် နှစ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ ပတ်သက်လာမယ်။ အဲဒီ လူတွေနဲ့ပဲ အသီးသီးအိမ်ထောင်ပြုချင်ပြီဟေ့ဆိုရင် လိုက်တားကြည့်စမ်းပါ။ ရမလားလို့။ ဒါတောင် လောကမှာကြုံဆုံရတဲ့ အချစ်ဆိုတာလောက်ရှိသေးတာ။ ဟိုးလောကီရော လောကုတ္တရာရေးရော နှစ်ဘဝလုံးအတွက် ပုံအပ် ယုံကြည်သက်ဝင်အချစ်ထားမိပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီယုံကြည်ချက်ကို လွင့်ပြယ်သွားဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှကိုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ နောက်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးကို ဘယ်လိုရအောင်ယူနိုင်ရင် ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဘယ်ဝါပေးမယ်လို့ စွပ်စွဲချက်တွေကတော့ နားထောင်ရတာ ရယ်တောင်ရယ်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ကို အသိဥာဏ်မဲ့နေကြပြီလား၊ မိန်းကလေးတွေကလည်း အဲဒီလောက် ဦးနှောက်နည်းကြသလား၊ လုံးဝ မှားယွင်းတဲ့ အချက်အလက်ပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာမှာ အစ္စလာမ်အဖြစ်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုအပိုင်းကို ရုပ်သဘောအရ ပြုမူလိုက်နာခြင်းမျိုးကို ခွင့်ပြုထားခြင်းအလျှင်းမရှိ။ ရုပ်ရော၊နာမ်ရောစူးစူးနစ်နစ်ယုံကြည်မှသာလျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာရန်အတွက် သူများဘေးတီးရုံနဲ့ဖြစ်လာခြင်းဟုတ်မဟုတ် သုံးသပ်နိုင်ပါပြီ။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်ကာကာ သက်ဝင်ယုံကြည်လာမှသာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းပါ။ ဒါ့ကြောင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ တခြားဘာသာဝင်တွေကို ယူဖို့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း လုံးဝမရှိသလို ၊ ယူဖို့မြှောက်ပေးခြင်းလည်း လုံးဝမရှိပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းသာ ပေါင်းစပ်စေချင်ကြတာပါ။ တခြားဘာသာဝင်တွေကို ယူမှ သာသနာပြုလို့ရမယ်လို့ ဘယ်မွတ်စလင်မ်ကမှ မခံယူထားပါဘူး။တကယ်တမ်း ဘာသာမတူပဲ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြသူတွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာကြည့်ပါ။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ နီးစပ်ပြီး ချစ်စိတ်တွေနဲ့ သူတို့ကြားမှာ ဘာ ဘာသာတရားမှ အတားအဆီးမရှိတော့ပဲ ပေါင်းစပ်မိကုန်ကြတာပါ။ ဒါဟာလည်း ကျားနဲ့မ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝပါ။ ဒီလို အတင်းလိုက်ပြီး သာသနာပြုစရာမလိုလောက်အောင်ကို ပြီးပြည့်စုံပြီးသားပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာဟာ လူမှုဘဝတည်ဆောက်ရေးလမ်းညွှန်မှုအပြည့်နဲ့ သာသနာပါ။ ဘာသာဝင်တိုင်းကို ပုခက်တွင်းမှ သင်္ချိုင်းအထိ ဘယ်လို လူမှုဘဝကို နေထိုင်တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိပ်လမ်းညွှန် ထားတဲ့သာသနာပါ။ ဒါကြောင့်် လက်တွေ့ကျတဲ့ လူ့ဘဝတည်ဆောက်မှုအပိုင်းတွေကို မျက်စိပွင့်နားပွင့်တဲ့ လူတွေအများအပြား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာတယ်ဆိုတာအထင်အရှားပါပဲ။ လိုက်ဆွဲဆောင်စရာကိုမလိုလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သာသနာတစ်ရပ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ကြကုန်သော လူအမျိုးမျိုး( လူဖြူ၊ လူမည်း၊ လူနီ၊ လူရိုင်း စတဲ့) လူပေါင်းစုံအတွက် သာသနာဟာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ သာသနာ( Universal Truth) ပါ။ ဘာသာတရားကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ရန်သူလိုသဘောထားနေတဲ့ လူတွေကိုလည်း ဘာသာတရားရဲ့ အေးရိပ်ဆာယာက ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
သင်သည် မည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ။ အစ္စလာမ်သာသနာက သင့်အတွက် စောင့်ကြိုနေပါသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်ဖြစ်ရန် သင်သည် တရုတ်ဖြစ်ရန်မလို၊ လူဖြူဖြစ်ရန်မလို၊ အာရပ်လူမျိုးဖြစ်ရန်မလို၊ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားဖြစ်ရန်မလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်သည်ဟု ခံယူထားသော တော်ဝင်မျိုးရိုးဖြစ်ရန်မလို။ အစ္စလာမ်ဟူသောသာသနာသည် ရှင်ဘုရင်နှင့်မင်းစေပင်လျှင် တန်းတူပင်ဖြစ်စေသော လူမျိုးစွဲကင်းသော၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကင်းသော ၊ မတရားမှုများကို စပ်ဆုပ်ရွံရှာပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာမဟူ မျှတစွာ တန်းတူကိုးကွယ်နိုင်သော သာသနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ကို သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရင်း…။
This entry was posted on March 3, 2013, in ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Infront of Thein Sein Rohingya Demonistration in Norway
နိုင်ငံသားဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဟာ မိမိနိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော →